Nahatratra Ny Toerana Ambany Tao Holandy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Avrily 2018 2:24 GMT
Vakio amin'ny teny 繁體中文, 简体中文, Ελληνικά, русский, Français, Deutsch, Español, Nederlands, Italiano, українська, English
Ny anatin'ny sinagoga Portogey ao Amsterdam, avy amin'ny Emanuel de Witte. Sehatra ho an'ny daholobe, tamin'ny Wikimedia Commons.
DADA Avy amin'i Karen Kao
Fony aho nifindra ho ao Pays-Bas (Holandy), vao avy natao raharaha mihitsy izaho sy ilay sakaizako Holandey. Nanaiky ny hiharitra mandritra ny herintaona aho. Nanaiky izy, fa raha mbola tsy tia an'iAmsterdam aho anatin'izany, dia hiverina any Etazonia izahay.
Nanao izay azony natao ny vadiko hanomanana ahy tamin'ilay tetezamita. Nomeny boky ho vakiana aho alohan'ny nifindrana— lisitra izay mitantara ny zavatra tsara sy ratsy tamin'ny tantaran'ny Holandey. Ny Vanimpotoanan'ny Volamena. Ny Voanjo tao Batavia. Ny Fanjanahan‘i Alemaina nandritra ny Ady Lehibe Faharoa. i Amsterdam amin'izao fotoana izao.
Ny anganon'ny namoronana ny Holandey
Tsy fantatro fa nananatra ahy momba ny anganon'ny namoronana an'i Holandy ireo boky ireo, izay miteny fa najoro teo amin'ny fototry ny fifandeferana ara-pinoana i Holandy.
Tamin'ny nahazon'ireo Holandey maivan-doha ny fahaleovantenany avy amin'ny Espaina Katolika tamin'ny 1648, tonga avy tany Holandy Espaniola ireo onja voalohan'ny mpitsoa-ponenana nikatsaka fahalalahana mampihatra ny finoany Protestanta. Nisy onja hafa nanaraka taty aoriana. Jiosy izay voaroaka avy tao Portiogaly ary ireo Huguenots Protestanta avy tao Frantsa. Maripamantarana nasionaly amin'ny fandeferan'reo Holandey i Anne Frank, Jiosy Alemàna izay nandositra ny Nazis ka nankao Amsterdam.
Nandritra ireo taona maro niainako tao Holandy , tsy dia naheno olona Holandey niresaka momba izay lasa izay aho. Ny zava-nisy dia hoe nilaina ireo mpitsoa-ponenana ireo mba hanampiana ny toekarena vao nisondrotra. Ny zava-nisy dia maty tany anaty toby fangejana ny ankamaroan'ireo Jiosy, isan'izany i Anne Frank. Angamba hoe adinon'ireo Holandey ny tantarany, izay faly nitsilailay tao anatin'ny famirapiratan'ny fandeferany ara-tantara.
Tao ho ato anefa, vondrona pôlitika faharoa lehibe indrindra ao Holandy ny antoko farany havanana Tsy Tia Vahiny ‘Antoko ho an'ny Fahafahan'ny Holandey (PVV) . Vitan'ny filohany, Geert Wilders, ny namindra samirery ny aloky ny politika ho any ankavanana no sady naneso ny adihevitry ny daholobe. Mahazatra ankehitriny ny mandre politisiana Holandey miresaka momba ny fanakatonana sisintanin'i Holandy.
Ela nanànana fifandraisana sarotra tamin'ireo vondrom-piarahamonin'ireo mpifindra monina ao aminy, izay antsoina hoe allochtonen, ny Holandey. Olona manana iray raha kely indrindra amin'ireo ray sy reniny teraka tany ivelany, no famaritana ny “mpifindra monina” nampiasain'ny Birao Foiben'ny Antontanisa Holandey (CBS). Araka io famaritana io, tsy ilaina ny mahafantatra raha teraka tao Holandy na tsia ilay olona. Allochtoon koa ny zanakin'ny allochtoon.
Eny an'arabe, tsy mitovy ny dikan'ny teny allochtoon. Miresaka kokoa an'ireo olona taranaka Tiorka na Maraokàna io teny io. Mihatra amin'ireo taranaka rehetra izy io, na vahiny na teratany. Teny manambany izy io izay efa nanoroana hevitra ahy imbetsaka ny tsy hampiasàna azy intsony hanondroana ny tenako. Tamin'ny 2016, efa najanon'ny Governemanta Holandey ny fampiasana ny teny allochtoon sy ny mitovy aminy ho an'ireo teratany, autochtoon. Mitovy daholo ihany, manohy ny fanavahana eo amin'ny mpifindra monina avy any andrefana (Etazonia, Kanada, Eoropa, Indonesia, Oseania ary Japana) sy ny sisa ny CBS. Tsy mampaninona an'ireo olona taloha anefa izany, saingy tsy mety amin'ireo vao tonga.
So even if the borders were to be closed, the far-right would still not be satisfied. Approximately 800,000 migrants of Turkish or Moroccan descent live in the Netherlands. Dutch politicians on the far-right and the center see this group as problematic……Ka na dia mikatona aza ireo sisintany, tsy mbola faly ihany ny havanana. Eo amin'ny mpifindra monina miisa 800.000 eo avy amin'ny taranaka Turk na Marokana no miaina ao Netherlands. Mahita ani'reo fiarahamonina ireo ho olana ny mpanao pôlitika avy any amin'ny havanana sy ao ampovoany.
Forum voor democratie (Tapatapaka ahitra ho an'ny demaokrasia)
Vondrona pôlitika vaovao izay nipoitra teo amin'ny tontolo Holandey nandritra ny fifidianana tamin'ny 2017 ny Tapatapaka Ahitra ho an'ny Demokrasia (FVD). Thierry Baudet mpitarika azy no lehilahy mety ho antsoin'ny Amerikana hoe “frat boy (zazalahy ratsy toetra anaty firahalahian'ireo mpianatra amerikana mpisotasota, Manana karazana rohimpirazanana sy fanabeazana izay mifandraika tsara amin'ny saranga antnontonony ao Holandy izy. Iray amintsika izy. Miantso ny FVD hoe “PVV lite” ny sasany amin'ireo mpandalina. Fankahalana vahiny afenina ao ambanin'ny ankosotra manifinà fahalalampomba anaty fiarahamonina.
Ny hisintona ny hambompon'ny mpitia tanindrazana no tetik'i Baudet. Atahorany hanary ny lovany mahafinaritra ara-kolontsaina ireo Holandey. Mino i Baudet fa fotoana izao hitakiana ireny fototra ireny alohan'ny hamongoran'ireo avy any ivelany azy tanteraka. Ajanony ny mandray an'ireo olona ireo. Loza mitatao ho antsika izy ireo.
Tiorka sy Maraokana izy ireo. Heverina ho Silamo daholo izy ireo, mafana fo na tsia. Mahita azy ireo eny an-dalana ianao. Vehivavy misaron-doha na manao burka. Lehilahy miaraka amin'ny volombava tsy voakarakara (manaraka ny fenitra hipster) izay manao “akanjo lasopy” araky ny fiantson'ny Holandey azy.
Nandritra ny sakafo indray hariva izay, nihaino namana nilelalela momba ny Silamo aho. Tsapan'ilay namanay fa be loatra no nataontsika handraisana azy ireo. Ho porofo amin'ny fandeferana ataon'ny Holandey, natolony ny zavamisy hoe mameno ny ankamaroan'ireo tsenakely amin'izao fotoana izao ireo vehivavy misaron-doha. Fa, hoy ilay namanay: ampy izay. Rarao ny burka, satria tsy ho fantatro velively izay olona ao anatiny.
Azo antoka fa tsy irery amin'ny onja vaovaon'ny tsy fandeferana ry zareo Holandey. Samy manana ny karazana mpitarika tsy tia vahiny i Frantsa, Aotrisy ary Hongria. Tsy lazaina intsony i Etazonia. Ny hevitro tsy hoe loza be noho ny Amerikana ny Holandey. Fa tsy tsara ry zareo.
Ka noho izany dia nirodana ny anganon'ny famoronan'ny repoblika iray najoro teo amin'ny fifandeferana ara-pinoana. Efa 29 taona izay no nanaovako izay fanamby izay tamin'ny vadiko. Mazava ho azy fa tiako ny mipetraka eto. Lasa olompirenena Holandey ny tenako tamin'ny 2013 satria mety hijanona eto mandrakizay ny tenanay. Ary amin'izany, mba tiako ny ho afaka mifidy.
Lasa Holandey tamin'ny fomba hafa maro koa aho. Lasa tsy mandefitra aho izao. Tsy azoko ekena ny fankahalàna ny silamo amin'ny anaran'ny fiarovana ny kolontsaina. Ary tsy vonona na afaka ny hanaiky ny anganon'ny famoronana olona Holandey malala-tsaina, feno fandeferana. Tato ho ato, vonona ny handao latabatra aho na hanary finamànana rehefa tonga ny fotoana. Teboka vaovao farany ambany io ho ahy aty “Pays-Bas” io.
Karen Kao dia poeta, mpanoratra tantara foronina ary mpanao andrana lahatsoratra mipetraka ao Amsterdam. Navoaka voalohany tao amin'ny Inkstone Press ito lahatsoratra ito.